बजारका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बजारका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष
लेख | दृष्टिकोण 105 views
बजारका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष
यो सिजनमा धितोपत्र बजार र बैङ्कहरूसँग सम्बन्धित केही महŒवपूर्ण निर्णय प्रकाशमा आएको देखिन्छ । तीमध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डले सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन २०७४ निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई यो निर्देशिका २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशिका धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको देखिन्छ । बोर्डले निर्देशिकामा कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा संस्थागत सुशासन र नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले तयार गरेको संस्थागत सुशासनमा सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्न, सञ्चालक समिति, सञ्चालकको आचरण तथा संस्थाको हितविपरीत कार्य नगर्न र पदको सदुपयोग गर्न जोड दिइएको छ । निर्देशिकामा सञ्चालकको योग्यता, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । साथै सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा साना लगानीकर्ताको हितलाई नबिर्सन निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले सञ्चालक समिति सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकमा संस्थाको साधारणसभाले सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने भनिए पनि नियुक्ति वा अनुमोदन हुनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालको कार्यकाल ४ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञाता र अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख अलगअलग व्यक्ति हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
सञ्चालकको आचरणको सम्बन्धमा सञ्चालक नियुक्त भएको १५ दिनभित्र निजको एकाघर परिवारका कुनै सदस्यको सम्झौता स्वार्थ वा हुनेवाला सम्झौताबारे जानकारी दिनुपर्ने तथा परिपालन अधिकृत सम्बन्धमा संस्थाले व्यवस्थापन, वाणिज्य, कानूनी विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी ३ वर्षको अनुभव भएकालाई नियुक्ति दिनुपर्ने छ । त्यस्तै, लेखा परीक्षण समितिमा सर्वसाधारणतर्फका सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत गरी ३ जनाको लेखापरीक्षण समिति गठन हुनुपर्ने जानकारी दिइएको छ । यो निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा निर्देशन दिँदै आएको गाइड लाइनकै आधारमा बनाइएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक नै देखिन्छ ।
धितोपत्र बजारको अर्काे उपलब्धिमध्ये टन्टलापुर घाममा उभिएर शेयर आवेदन फाराम बुझाउन नपर्ने गरी आस्बा फाराम बुझाउने बन्दोबस्त भएकोमा त्यसलाई अझै आधुनिकीकरण व्यवस्था गर्दै सी–आस्बाको नामले नयाँ प्रणाली छिट्टै लागू गर्ने प्रबन्ध गरिँदै छ । यसको अर्थ सेन्ट्रलाइज एप्लिकेशन सपोर्टेड वाई ब्लकेड एमाउण्ट हो र यो केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवामार्फत घरमै बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट शेयर आवेदन गर्न सकिने इन्टरनेट सेवा प्रयोग सुविधा नहुनेहरूले आफ्नो नजिकको बैङ्किङ सेवा दिने संस्थाको शाखामार्फत आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसलाई पनि धितोपत्र तथा सीडीएसले लगानीकर्तालाई धेरै लाभ लिन सक्ने जनाएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत अबदेखि आफ्नो खाता रहेको बैङ्कबाट सीआरएन नम्बर प्राप्त गरेका लगानीकर्ताले मात्र शेयर खरिद आवेदन गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताको हितग्राही खाता रुजु गरेपछि प्रत्येक लगानीकर्ताका लागि बैङ्कले सी–आस्बा रजिष्टे«शन (सीआरएन) प्रदान गर्ने छन् ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले दोस्रो त्रैमास प्रतिवेदनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा बैङ्कहरूले सरदर १० प्रतिशत बढी अर्थात् गत वर्षको दोस्रो त्रैमासभन्दा प्रगति गरेको देखिन्छ । २८ बैङ्कहरूको प्रकाशित दोस्रो त्रैमासको आधारमा २१ बैङ्कले प्रगति गरेको देखिन्छ भने ७ बैङ्कहरूको नाफा केही घटेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा वृद्धि गर्नेमा एनसीसी बैङ्क ३ सय ५६ दशमलव ७४ प्रतिशत देखिन्छ भने प्रभु बैङ्क ४३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । प्रभु बैङ्कको नाफा घट्नुमा ब्याज आम्दानीभन्दा ब्याज खर्च बढी हुनु नै देखिन्छ । २१ बैङ्कको नाफा वृद्धि हुनुको अर्थ आगामी वर्षमा पनि बैङ्कले राम्रै प्रतिफल दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ शेयर बजार केही समयका लागि झरेको देखिन्छ र केही सातामा यसले सुधारको गति लिनेछ ।
माघमा देखिएको रमाइलो खबरमध्ये बैङ्कहरूले कर्जा स्वाप गर्न पाउने पनि एक हो । अर्थात् एक बैङ्कले अर्काे बैङ्कको राम्रो नराम्रो कर्जा विक्री खरिद गर्न मिल्ने । यसले गर्दा कुनै बैङ्कले खराब कर्जा भएकै कारण करोडौं रुपैयाँ प्रोभिजनमा राख्नुपर्दा बैङ्कको प्रगति देखाउन नमिल्ने भइरहेकोमा अबदेखि त्यस्तो खराब कर्जा कुनै बैङ्कलाई आपसी समझदारीमा औपचारिक तबरमा बेच्न सकिने भएको छ । यसबाट बैङ्कहरू निकै उत्साहित देखिएका छन् र यसका लागि बैङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाली बैङ्किङ प्रणालीमा औपचारिक रूपमा कर्जा विनिमय (क्रेडिट स्वाप)लाई मान्यता दिएको छ । यो निर्णयलाई पनि शेयरबजारमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
बजारमा अर्काे चर्चाको विषय हो नेप्से घटेको अवस्था । यहाँ बुझेका लगानीकर्ताले पनि सोध्ने गरेका छन् र नबुझेका लगानीकर्ताले पनि एकआपसमा बजारमा नेप्से घटिरहेकोबारे जिज्ञासा प्रकट गर्दछन् । हाल फागुन १ गतेसम्ममा नेप्से घटेर १ हजार ३ सय ८० मा आइपुगेको अवस्था छ । सो घट्नुको कारणमध्ये पहिलो बैङ्कले निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर बढाउँदै लग्नु नै हो । यसपालि ब्याजदर मुद्दतीको साथै बचतमा समेत बढाएको अवस्थामा छ । अर्काे पक्षमा धेरै बैङ्क तथा बीमा कम्पनीले हकप्रद शेयर तथा एफपीओसमेत गरेका र केही जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरिदिँदा आपूर्ति ज्यादा भई बजारमूल्यमा प्रभाव पर्न गएको साथै लगानीमा नवप्रवेशीहरूको सहनशक्ति कम भई विक्रीमा चाप बढ्नु प्रमुख कारण हो । यसको सुधार हुन केही साता धैर्य गर्नु आवश्यक छ ।
लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तासँग सम्बन्धित बैङ्क खाताहरू बैङ्कहरूले ६ महिनासम्म खाताबाट रकम नझिक्ने खातावालाको खाता डोरमेण्ट भन्दै निष्क्रिय खाताको वर्गमा राखेर ६ महिनापछिको चेकसमेत फर्काउने गरेको छ । यस्तो गर्नु बैङ्कको मिचाहापन हो । हरेक खातावालाले प्रत्येक ६ महिनामा एउटा चेक काटेर पैसा झिक्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । बचतखाताको पैसा आफूलाई आवश्यक परेको बेला मात्र झिकिन्छ भन्ने बैङ्कलाई थाहै छ । दुःख दिने नियतले किन डोरमेण्ट गरिन्छ ? विनिमयपत्र ऐन २०३४ को दफाअनुसार डोरमेण्ट गर्ने अधिकार बैङ्कलाई छैन । त्यही महसूस गरेर नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले ६ महिनाको बदला १ वर्षमा डोरमेण्ट गर्ने अनुमति मागेको देखिन्छ । नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को ज्ञान नै नभएको बुझिन्छ । त्यसैले कानूनअनुसार डोरमेण्ट प्रणाली खारेज हुनु लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको हितमा देखिन्छ ।
अर्काे एउटा लगानीकर्ता र साधारणसभासँग सम्बन्धित एउटा रमाइलो कुरा पनि छ । अचेल साधारणसभा त खाजासभामा परिणत भइसकेछ । साधारणसभामा केकस्तो प्रतिवेदन पेश हुन्छ, केकति लाभांश पेश हुँदै छ, केकस्तो लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदै छ, अपारदर्शी लेखा राखिएका छन् कि, भविष्यका योजना के कस्ता छन्, घाटामा गएको कम्पनी छ भने के कारणले घाटामा गएको छ भन्ने चासो राखिनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन । साधारणसभामा के कस्ता टिप्पणी तथा सुझाव प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासो राख्ने शेयरधनीहरू १० प्रतिशत मात्र देखा पर्दछन् । बाँकी ९० प्रतिशत शेयरधनीहरू खाजाको लाइनतिर झुम्मिसकेका हुन्छन् । धेरै शेयरधनीलाई घाटा हिसाबसँग मतलब नभई पेटभर खाजा खान पाइने वा नपाइनेसँग सरोकार हुने गरेको छ । खाना खाने स्थानमा अनुशासनहीन चाप देखिएकै कारण सोल्टी होटलले यसपालिको साधारसभा आर्मी अफिसर्स क्लबमा गरेको छ । साथै खानाको साटो खाजामा सीमित गरिएको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कको साधारणसभामा हलभित्रको व्यवस्थापनभन्दा खाजाको व्यवस्थापन गाह्रो भएको छ, जुन साधारणसभा पनि आर्मी अफिसर्स क्लबमै भएको थियो । उक्त साधारणसभामा ४ हजार लञ्च बक्स तयार गरिएकामा अर्को २ हजार फेरि अर्डर दिनुपरेको थियो । एक बराबर एक बोनस शेयर दिने र बजारमा किनबेच पनि हुने कारण यही हिसाबमा आगामी साधारणसभामा १० हजार लञ्च बक्स तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ ? साधारणसभा हाल आएर खाजासभामा परिणत भएको कारण साधारणसभामा विकृति भित्रिरहेकामा पनि धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर विकृति रोक्ने प्रयासको थालनी गर्ला, जसले गर्दा साधारणसभा मर्यादित बनोस्, विकृति हटोस् ।